बजेटमा युवा रोजगारी सवाल
अर्थमन्त्रीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संसद्को दुवै संयुक्त सदनमा १३ खर्ब १५ अर्ब १५ करोड १७ लाख विनियोजन गरेका छन् ।
पंखा त चल्दैन, उद्योग कसरी चलाउने ?
एकातिर सरकार औद्योगिक उत्पादन १२ प्रतिशतले बढाउने भनेर बजेटमा उल्लेख गर्छ भने अर्कातिर बाँकेका उद्योग, व्यवसायीहरूले बढ्दो ऊर्जा संकटका कारण उद्योग–व्यवसाय धरासायी हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यातायात सिन्डिकेट बहस : वर्तमान र भविष्य
लगभग २०७४ चैत मध्यदेखि वैशाख महिना अवधिभर सिन्डिकेट शब्द नेपाली जनजनमा छायो र दैनिकजसो सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रमुख समाचारका रूपमा छाइरह्यो ।
के बजेटले पुँजीबजारलाई गतिशील बनाउँछ ?
२०७५ जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र मूल्यांकन भइरहेका छन् ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र
नेपालमा विगत १० वर्षमा ठूला–ठूला अस्पतालहरू उल्लेख्य रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । आज ती तमाम अस्पतालको भ्रमण गर्ने हो भने बिरामीहरूको निकै ठूलो चाप देख्न सकिन्छ ।
चुनौतीपूर्ण लघुवित्त क्षेत्र
वित्तीय समावेशीकरण र गरिबी निवारण कार्यमा लघुवित्तको अहम् भूमिका रहे तापनि पछिल्लो समयमा नेपालमा लघुवित्त क्षेत्र मुनाफामुखी बन्दै गएको आरोप छ ।
अभियान, महाअभियान र विशेष अभियान
विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउन, टिकाउन तथा सिकाउनका लागि गरिने अभियानमध्येको एक अभियान विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी भर्ना अभियान हो ।
गुल्मी महोत्सवको आम्दानी
सम्पन्न भएको झन्डै दुई महिना बितेपछि बल्ल तेस्रो गुल्मी महोत्सवको आयव्यय सार्वजनिक भएको छ । गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा गत वर्ष चैत १६ गतेदेखि २५ गतेसम्म सदरमुकाम तम्घासमा महोत्सव सम्पन्न भएको थियो ।
मधेसमा आर्थिक विकास : सन्दर्भ जनकपुर
राजनीतिक रूपमा अझै पनि विकसित लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको मुलुकमा धेरै दल हुँदा मत बाझिने र सहमति हुन नसक्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भने अनुकूल राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरणले आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान हुँदै गएका छन् । यो वर्षको सुरुदेखिकै सक्रिय मनसुन, निर्वाध विद्युत् आपूर्ति, पुनर्संरचनाको कार्यमा तीव्र प्रगति आदिले आर्थिक स्थितिलाई मजबुतीतर्फ अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
कसरी हुन्छ आर्थिक विकास ?
मुलुक अब सामान्य गतिबाट विकास र समृद्धिमा पुग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निरन्तरता मात्रै हुनु हुँदैन ।
बुधवार, जेठ १६, २०७५
नेपालको स्तरोन्नतिका अवसरहरू
व्यक्ति होस् वा देश, तल्लो स्तरबाट माथिल्लो स्तरमा पुग्नु धेरै नै गौरवको विषय हो । नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को विकास नीति समितिमा गरिने समीक्षामा हाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति नगरिदिन लेखिपठाएको छ ।
समृद्धिका लागि केही आधारभूत विषय
हालै तथ्यांक विभागबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी बढेर १ हजार ४ अमेरिकी डलर (१ लाख ६ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ) पुगेको छ ।
‘माछा माछा भ्यागुता’
बजेट सुन्दै जाँदा ‘माछा माछा भ्यागुता’ जस्तो अनुभूति भयो । बजेट सबै हिसाबले पुरानैको निरन्तरतामा आयो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्राथमिकतामा परेनन्
बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सोचेजति प्राथमिकता दिन सकेन । गौरवका आयोजनामा पोहोर उब्रिएको बजेट थप्दै जानुपथ्र्यो, त्यसो भएन । गौरवका आयोजनाका लागि बजेटको अंश सानो भयो ।
अपेक्षित आर्थिक वृद्धि घट्ने र मुद्रास्फीति बढ्ने बजेट
यो बजेटले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको झलक दिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई यो बजेटले उपेक्षा गरेको छ ।